» निषेधाज्ञामा हवाई यात्रुलाई यस्तो सुविधा
निषेधाज्ञामा हवाई यात्रुलाई यस्तो सुविधा
२०७८ बैशाख १६, बिहीबार १८:०७
काठमाडौं । निषेधाज्ञा अवधिमा त्रिभुवन विमानस्थल भएर हवाई यात्रा गर्ने यात्रुले हरियो नम्बर प्लेटको ट्याक्सी प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । विमानस्थल कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय उडानका यात्रुले विमानस्थलसम्म आवतजावत गर्न हरियो नम्बर प्लेटको ट्याक्सी प्रयोग गर्न पाउने जनाएको हो ।
यस्तो सुविधा विमानस्थल कार्यालयले अनुमति दिएका हरियो नम्बर प्लेटका एयरर्पोट प्रिपेड ट्याक्सीको हकमा मात्र लागू हुने जनाइएको छ ।
हवाई यात्रुले वैधानिक हवाई टिकट/पासपोर्ट/भिसा देखाएका आधारमा विमानस्थलमा आवतजावत गर्न सक्नेछन् । यसका लागि सवारी साधनको सुविधा आवश्यक भएमा प्रिपेड ट्याक्सी बोलाउन सकिने छ । विमानस्थल कार्यालयका अनुसार प्रिपेड ट्याक्सीलाई फोन गरेपछि सम्बन्धित स्थानमा पुग्ने छन् । उक्त प्रयोजनका निम्ति सम्बन्धित ट्याक्सीको फोन नम्बरसमेत विमानस्थल कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ । यो सुविधा दुवैतर्फका यात्रुले पाउने छन् ।
कोभिड १९ महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले आजदेखि राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू गरेको छ । यसक्रममा मुलुकको आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय हवाई उडान भने नियमित सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
विमानस्थलको निर्णयबाट यात्रु तथा एयरलाइन्सलाई निकै राहत भएको एयरलाइन्सले जनाएका छन् । बुद्ध एयर र यती एयरका अधिकारीले निषेधाज्ञाको पहिलो दिन यात्रु विमानस्थलसम्म लैजान सहजीकरण भएको बताए । यती एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौला र बुद्ध एयरका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र कर्णले विमानस्थलसम्म यात्रु आवतजावत गर्न पहिलो दिन खासै समस्या नभएको जानकारी दिए ।
आज दिनभर आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय उडान भए । विमानस्थल कार्यालयको विवरणमा बुधबार आन्तरिकतर्फ सर्वाधिक १५ हजार २६३ यात्रु आवतजावत गरेका छन् । त्यसअघि मङ्गलबार १२ हजार २५१ यात्रुले सेवा लिएका थिए । विगत दुई दिनको तुलनामा आज उडान सङ्ख्या करिब आधा मात्रै हुने विमानस्थलले तालिका निर्धारण गरेको छ । सरकारी निर्णयअनुरुप हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले निषेधाज्ञाका बीच आन्तरिक उडान सञ्चालन गरिरहेका छन् । अन्तरराष्ट्रियतर्फ पनि नियमित उडान भइरहेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ ।
११ महिनामा नेपाल भित्रिए १ लाख २६ हजार पर्यटक, ‘ओमिक्रोन’का कारण व्यवसायी आतंकित
मर्जरका नाममा चरम लापरवाही, सेयर कारोबार रोक्का हुँदा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ फ्रिज
भारतबाट घटेर आयो पेट्रोल र डिजेलको मूल्य, ग्यासको बढ्यो, नेपालमा के होला ?
एनएमबि यसरी बन्यो ५ वर्षमा ४ पल्ट ‘बैंक अफ द इयर’ र नेपालको पहिलो एशियाको उत्कृष्ट बैंक
करण चौधरीको पक्षमा बन्यो बलियो टिमः सिप्रदीदेखि चन्द्र ढकालको साथ
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कंदा ल्याएको मोबाइललाई अर्थमन्त्रीले ‘अवैध आयात’ भनेपछि…
करमा एक दर्जन झमेला, कहिले होला व्यवसायीको हीत ?
एशियाकै सर्वोत्कृष्ट बैंक एनएमबिलाई ४ प्रश्न र त्यसको जवाफ
जयनगर–बर्दिवास रेलमार्गमा पर्ने जग्गाधनीलाई एकैपल्ट मुआब्जा पाउने आश, कहिले बनिसक्ला ?
गोदावरी जाने बाटो कालोपत्रः ५ वर्षपछि बल्ल सकिन लाग्यो काम
दोब्बर पैसा कमाउने लोभ : मिटरब्याजमा ऋण दिने साहु नै ठगिएपछि…
८१ करोड खर्चेर ८ तले सुविधासम्पन्न भवन बनाउँदै बीमा समिति